बुवा पनि साथी पनि – Khabar Silo
बुवा पनि साथी पनि
काठमाडौं। नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ–‘छोरीहरू जहिले पनि बुवाका प्यारा हुन्छन् ।’ बुवाले छोरीलाई निकै माया–ममता दिएर हुर्काउँछन् । हाम्रो समाजको परम्परागत चलनअनुरूप छोरीहरू हुर्किएपछि पराई घरमा जान्छन्, सधै आफ्नो साथमा हुँदैनन् । त्यसैले पनि बुवाहरू छोरीको भविष्यप्रति बढी चिन्तित हुन्छन् ।
छोरीलाई सबल र सक्षम बनाइयो भने पराई घरमा दुःख पाउँदैनन् भन्ने सोच सबैजसो बाबुमा हुन्छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय बुवा यस्ता हुन्छन् जसले छोरीको सुरक्षा, खुसी, उन्नति, प्रगति एवं प्रतिष्ठाका लागि जीवनभर संघर्ष गर्नुपरे पनि हार मान्दैनन् । मोडलिङ हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेतृ आँचल शर्मा चञ्चले स्वभावकी छिन् ।
उनलाई गम्भीर हुनै आउँदैन । त्यसैले उनका बुवा उत्तम दवाडी भन्छन्–‘यो अझै केटाकेटीजस्तै छे ।’ आँचल र उनका बुवाको कुरा खुबै मिल्छ । उनीहरू एक–अर्कासँग कुरा गर्दै रमाउँछन् । आँचल बेलाबखत घर बस्दा बुवासँग खुलेर कुरा गर्छिन् । उनीहरूको कुरा बुवा र छोरीको भन्दा पनि साथीको जस्तो हुन्छ ।
आँचल भन्छिन्–‘मेरा बुवा बुवासँगै साथीजस्तो हुनुहुन्छ ।’ हुन त आमासँग पनि उनको कुरा नमिल्ने होइन तर बुवासँग बढी घनिष्टता छ । आँचल भन्छिन्–‘सायद बुवा दिनभर अफिसमा हुने भएर होला हामी आमासँग बढी समय बिताउँछौं । त्यसैले पनि उनलाई बुवा प्यारो जस्तो लाग्छ, बुवा र छोरीको सम्बन्ध सुमधुर भएजस्तो लाग्छ
किनभने बुवाबाट जीवनका कतिपय पक्षमा खासै रोकटोक हुँदैन, स्वतन्त्रता पाइन्छ । हुन त आमासँग पनि उनको कुरा नमिल्ने होइन तर बुवासँग बढी घनिष्टता छ । आँचल भन्छिन्–‘सायद बुवा दिनभर अफिसमा हुने भएर होला हामी आमासँग बढी समय बिताउँछौं । त्यसैले पनि उनलाई बुवा प्यारो जस्तो लाग्छ,
बुवा र छोरीको सम्बन्ध सुमधुर भएजस्तो लाग्छ किनभने बुवाबाट जीवनका कतिपय पक्षमा खासै रोकटोक हुँदैन, स्वतन्त्रता पाइन्छ ।
म बुवाकी आज्ञाकारी छोरी हुँ । बुवा मेरा समझदार साथी हुनुहुन्छ । मेरो र बुवाको विचार मिल्छ । त्यसैले घरपरिवारमा म सबैभन्दा बढी बुवासँग नै कुराकानी गरिरहेकी हुन्छु । बुवाले मलाई कहिल्यै नियन्त्रण गर्नुभएन । मलाई करियरमा अघि बढ्न सधै हौसाइरहनुभयो । म जहिले पनि हरेक कुराको क्रेडिट बुवालाई दिन्छु ।
मेरो सबैभन्दा नजिकको र भरपर्दो साथी भनेकै बुवा हुनुहुन्छ । कुनै कुरा गर्नुपरे म बुवासँगै खुल्छु । मलाई बुवासँग निर्धक्क कुरा गर्न मन लाग्छ । आफ्नो मनको कुरा उहाँसँग शेयर गरिरहन्छु । म आफ्नो कमजोरी बुवालाई मात्र भन्छु । अरूलाई भन्न नसकेको कुरा पनि बुवाका अगाडि भन्न सक्छु । म बुवाप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा गर्न सक्छु ।
गाली गर्नुपर्ने ठाउँमा गाली, माया गर्नुपर्ने ठाउँमा माया, हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा हौसला–मेरा बुवालाई हामीजस्तो युवापुस्तालाई के मनपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान छ । बुवाले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ । मेरो स्वभाव र मन पनि बुझ्नुहुन्छ । म पनि बुवाको मन बुझ्छु । उहाँलाई के गर्दा बिझाउँछ, के गर्दा चित्त बुझ्दैन भन्ने कुरा थाहा छ ।
हाम्रो सोंच र आनीबानी पनि मिल्छ । आमा धर्मकर्ममा बढी नै विश्वास गर्नुहुन्छ । आमा पूजापाठ गर्ने, व्रत बस्ने जस्ता काममा व्यस्त रहनुहुन्छ । म पनि धर्ममा आस्था राख्छु तर आमाजस्तै मन्दिर धाउने, पूजा गर्ने, व्रत बस्ने काम चाहिँ गर्दिन । धर्म भनेको मनमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । नारी म्यागीजिन बाट साभार ।
नायिका श्वेताको बिवाह यस्तो छ खास कुरा पुरा हेर्नुहोस
Posted on November 12, 2020 Author khabar silo
आफुभन्दा धेरै कान्छा युवकसँग बिवाह गर्दैछिन् श्वेता ? यतीबेला अभिनेत्री स्वेता खड्काले बिहे गर्न लागेको खबर निकै चर्चामा छ । केही दिनयता स्वेताको बिहेबारे खबर चर्चामा आए । खासमा दशैंको टीका लगाएका बेला एक युवकसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएपछि स्वेताको बिहेबारे खबर भाइरल हुन पुगेको हो । दशैंका बेला सार्वजनिक तस्वीर कसको हो ? धेरैको […]
११ बर्षीय भाइरल कमला ब्युटीपार्लर पुग्दा घेरे उनको फ्यानहरुले!कहाबाट आयो यति धेरै पैसा कमललाई!
कमला घिमिरे फेरी काठमान्डौ आएकी छिन्।फेसियल हाउसमा सुन्दरी बन्न पुगेकी कमललाई उनको फ्यानहरुले घेरेको छ।कमला घिमिरेले गाएको दोहोरीले चेर्चा पाएको केहि समय बित्न नपाउदै उनका लाखौ फ्यानहरुले कमलाको खोजि गरिरहेका छन।सोहि घेरामा कमला परेकी छिन। कमला घिमिरेको ११ बर्षीय उमेरको कलाको प्रशंसा गर्नेहरु चर्चित कलाकारहरु पनि पर्छन।उनि राम्रो गाउन सक्ने र एउटा अदभुत क्षेमता प्रस्तुत […]
बलिउड नायिका काजोल अब लेखिकाको पनि पहिचान बनाउन उद्धत भएकी छन्।उनले सहकर्मी श्रीदेवीका बारेमा लेखिएको पुस्तकको प्रस्तावना लेखेकी छन्।दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीकाको बायोग्राफीमा आधारित ‘श्रीदेवी द इन्टरनल स्क्रिन गडेज’ को प्रस्तावना काजोलले लेखेकी हुन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। पुस्तकबारे काजोलले लेखेकी छन्, ‘म फिल्मको सेटमा श्रीदेवीको स्टारडम र ठूलो पर्दामा उनको जादू हेर्दै […]
रोल्पाका सनी विश्वकर्मा बने पहिलो ‘आईएमई लोकस्टार’, जिते ५० लाख
विश्व टेष्ट च्याम्पियनसिपका लागि इंग्ल्याण्डले श्रीलंकाको भ्रमण गर्ने